ပလက်စတစ်ဘူး၊ခွက်တွေ သုံးရင် သတိပြုစရာ အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်
ပလက်စတစ်ဘူး၊ခွက်တွေ သုံးရင် သတိပြုစရာ အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ် ပလပ်စတစ် အသုံးအဆောင်တွေကို ရည်ရှည်သုံးမယ်၊ အကြိမ်ကြိမ် ထည့်မယ်၊ သုံးမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားရင် ဖင်ကိုသာ လှန်ကြည့်လိုက်ပါ …။ အောက်ခြေတနေရာမှာ အထူးသဖြင့် ဖင်မှာ တြိဂံလေးထဲမှာ 1 ကနေ7အထိဂဏန်းတလုံးနဲ စာ ၂လုံး၊ ၃လုံး ပါတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဓိပ္ပါယ်တွေကတော့…. #1 ဆိုရင်… (PET or PETE ) သုံးတဲ့ပလတ်စတစ်အမျိုးအစားပါ သူကတခါပဲ သုံးလို့ ရပါတယ်။ ထပ်ခါသုံးရင် အောက်စီဂျင်နဲပေါင်းမယ်။ နေရောင်ခြည် အပူရှိန်နဲ့တွေ့ရင် အဆိပ်ပစ္စည်းတွေ ရေထဲကို ပျော်ဝင်စေပါတော့တယ် …။ ရေသန့်ဘူးနဲ့အချိုရည် တော်တော်များးများကို …
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို တစ်ပြားမှ မကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးနည်း
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို တစ်ပြားမှ မကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးနည်း ” ခွဲစိတ်ရင် (၁၀) သိန်းအထက်ကုန်ကျနိုင်မယ့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို တစ်ပြား မှ မကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းသက်သာသွားတဲ့ ဆေးနည်း “ နှလုံး သွေးကြောကျဉ်းပြီး အသက်ရှူုမဝ၍ ဆရာဝန်နှင့်ပြ၊ ဆေးများသောက်သော်လည်း သက်သာလှသည် မဟုတ်ပါ …။ နုလုံး အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် ပြကြည့်ရာ ခွဲစိတ်ဖို့အကြံပေးပြီး ရက်ချိန်းပေးထားသည် ဆိုပါသည်။ ထိုသူငယ်ချင်း ကံကောင်းသည်ဟု ဆိုရပေမည် …။ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှ ဆေးနည်းကောင်းလေးတစ်ခုရ၍ ခွဲစိတ်ချင်သော စိတ်ဆန္ဒလည်း မရှိသောကြောင့် ထိုဆေးနည်းလေးအား အားကိုးအားထားကာ ဆေးညွှန်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် …။ သူငယ်ချင်းအားလည်း မခွဲစိတ်စေချင်ပါအကြောင်းကား ခွဲစိတ်မည်ဆိုပါက သိန်း(၁၀)အထက် …
ခေတ်နဲ့သစ် မေမေ ချစ်သုဝေကော ဟုတ်ရဲ့လားလို့ သေချာပြန်ကြည့်ယူရမယ့် ချစ်သုဝေရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ပုံလေးများ
ခေတ်နဲ့သစ် မေမေ ချစ်သုဝေကော ဟုတ်ရဲ့လားလို့ သေချာပြန်ကြည့်ယူရမယ့် ချစ်သုဝေရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ပုံလေးများ ခေတ်နဲ့သစ်ရဲ့ မေမေ ချစ်သုဝေကတော့ ဂီတ‌လောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလို ပရိသတ်တွေ သည်းသည်းလှုပ်အောင်ချစ်ရတဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိခင်တစ်ဦးပါ။ ချစ်သုဝေက အနုပညာလောကမှာသာ ပါရမီရှိသူတစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ သမီးလေးတွေအတွက်လည်း မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေတတ်နိုင်သလောက်ရင်း တစ်ဖက်မှာလည်း ပရဟိတ ကုသိုလ်အလုပ်တွေကို လုပ်တဲ့ မေမေ ချစ်သုဝေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ပရိသတ်တွေအရင်ကတည်းက စသိခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ယခုအချိန်ပြန်မြင်ရမယ်ဆိုရင် မှတ်မိပါအုံးမလား။ ကလေးတို့ မေမေချစ်သုဝေရဲ့ လူငယ်ဆန်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ယခုတစ်ဖန်ထပ်မံမြင်တွေ့ရမှာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ်က ချစ်သုဝေကို …
ဟစ်တလာတိုက်ခိုက်မှုကြီးကို ဟောကိန်းမှန်ထားခဲ့တဲ့ အကြားအမြင်ဆရာရဲ့ ၂၀၂ဝ ဟောထားချက်ကြီး…
ဟစ်တလာတိုက်ခိုက်မှုကြီးကို ဟောကိန်းမှန်ထားခဲ့တဲ့ အကြားအမြင်ဆရာရဲ့ ၂၀၂ဝ ဟောထားချက်ကြီး… ဟစ်တလာအကြောင်းနဲ့ ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုကြီး ဟောကိန်းမှန်ထားတဲ့ အကြားအမြင်ဆရာက ၂၀၂၀ မှာ တတိယကမ္ဘာစစ် စဖြစ်မယ်လို့ ဟောထား တယ်လို့သိရ ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုကြီးနဲ့ ဟစ်တလာအကြောင်း ဟောကိန်းမှန်ထားတဲ့ အကြားအမြင်ဆရာက ၂၀၂၀ မှာ တတိယကမ္ဘာစစ် စဖြစ်မယ်လို့ ဟောထားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက် လာမယ့်နှစ်သစ်ဟာ ပိုမိုကောင်းမယ်လို့ အကောင်းမြင်ထားကြသူတွေအတွက်တော့ လာမယ့် ၂၇ နှစ်တာ ကာလအတွက်တော့ သတင်းဆိုး ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဟောကိန်းတွေ ဒက်ထိမှန်ပြီး နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ အနာဂတ်ဟော အကြားအမြင်ဆရာ နောစထရာဒါမျူ့စ်ရဲ့ ၂၀၁၉ အတွက် ဟောကိန်းကြောင့်ပါပဲ။နောစထရာဒါမျူ့စ်ဟာ ဟစ်တလာ ပေါ်ထွန်းလာမှာနဲ့ ၉/၁၁ …
ကြာသပ​တေး သားသမီးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရင် ဒီအချက်တွေ သိထားသင့်ပါတယ် ကြာသပ​တေး သားသမီးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရင် ဒီအချက်တွေ သိထားသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။ ကြာသပ​တေး သားသမီးတွေဟာ ချစ်သူကို အရမ်း ချစ်တတ်ကြပါတယ်… ဒါပေမယ့် သူတို့ကို စိတ်နာအောင်တော့ သွားမလုပ်လေနဲ့… စိတ်နာရင် တစ်သက်လုံး လှည့်ကြည့်မှာ မဟုတ်ဘူးနော် …. ။ စိတ်ကတော့ ကောက်သလားမမေးနဲ… အားနေ တခုခုကို ကောက်နေရမှ… အကြာကြီးတော့ စိတ်မဆိုးတတ်ဘူး… . ။ သူတို့ဟာ အရှက်အကြောက် အရမ်းကြီးတယ်… ချစ်သူကို စာနာနားလည်မှုလည်း ပေးနိုင်တယ်… ပေးကမ်းရက်ရောတဲ့ နေရာမှာလည်း နှစ်ယောက်မရှိဘူး… ။ ဥာဏ်ကောင်းသလောက် တခါတလေမှာ အပျင်းကြီးတတ်တယ်… ဘယ်လောက်တောင် …
ရုပ်ဆိုးလေလေ ၊ သူများထက် လစာပိုကောင်းလေ လို့ စစ်တမ်းတွေဖော်ပြ
ရုပ်ဆိုးလေလေ ၊ သူများထက် လစာပိုကောင်းလေ လို့ စစ်တမ်းတွေဖော်ပြ အလုပ်တစ်ခု လျှောက်လို့ သင်က တခြားသူတွေထက် အရမ်းတွေပိုပြီး ကြည့်ကောင်းနေရင်၊ အရမ်းတွေ စမတ်ကျနေရင် လစာပိုရမယ်လို့ ထင်နေပါသလား။ အဲဒါဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့အတွေးတွေ မှားနေပြီလို့သာ သိလိုက်ပါ။ တကယ့် လက်တွေ့မှာတော့ လုံးဝကို ဆွဲဆောင်မှုမရှိတဲ့ သူတွေဟာ တခြားသူတွေထက် ပိုကောင်းတဲ့ လစာမျိုးကို ရကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ စစ်တမ်းတွေက တွေ့ရှိ ထားခဲ့တာပါ။ (၂၀၁၈) ခုနှစ်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်တမ်း တစ်ခုမှာ အမေရိကန် နိုင်ငံက လူငယ်ပေါင်း (၂၀၀၀၀) ကျော်ကို စစ်တမ်း ကောက်ယူခဲ့ပြီး အရမ်း ကြည့်ကောင်းပြီး ရုပ်ချောတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ …
ပြည်ထောင်စုနေ့မှာပဲ စိန်ခေါ်လာသူကို ချေမှုန်းဖို့ လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့ အောင်လ
ပြည်ထောင်စုနေ့မှာပဲ စိန်ခေါ်လာသူကို ချေမှုန်းဖို့ လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့ အောင်လ မြန်မာစပါးအုံးလို့ အမည်ရထားတဲ့ ဝိတ်တန်း ၂ ခုရဲ့ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်သူ မြန်မာနိုင်ငံဖွား ကချင် တိုင်းရင်းသားကြီး အောင်လကတော့ မှတ်မှတ်ရရပဲ သူ့ရဲ့စိန်ခေါ်လာသူနဲ့ ထိုးသတ်သွားမယ့် တရာဝင် သဘောတူ စာချုပ်တစ်စောင်ကို One Championship နဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ မနက် ၁၀ နာရီခန့်က ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လနဲ့ ထိုးသတ်မယ့် ပြိုင်ဘတ်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ မြို့တော်ဂျာကာတာမှာ ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ ONE Championship – Warrior’s Code ပြိုင်ပွဲတွင် ဘရာဇီးတိုက်ခိုက်ရေးသမားကို ရမှတ်နဲ့ အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ ဒတ်ခ်ျလူမျိုး တိုက်ခိုက်ရေးသမား …
အရမ်းကောင်းလွှန်းလို့ပါ နေ့တိုင်းဖတ်ရန် (၂၂) ချက်
အရမ်းကောင်းလွှန်းလို့ပါ နေ့တိုင်းဖတ်ရန် (၂၂) ချက် အရမ်းကောင်းလွှန်းလို့ပါ နေ့တိုင်းဖတ်ရန် (၂၂) ချက်ပါ … ။ နေ့တိုင်းဖတ်ရန် (၂၂) ချက်မှာ …… (၁) ပြုံးပါ။ (၂) ငြင်းခုံခြင်းအား ရှောင်ရှားပါ။ (၃) တစ်ဖတ်သား၏ အယူအဆကို အလေးဂရုပြုပါ။ (၄) သူတစ်ဦး တစ်ယောက်အား မှားသည်ဟု ဘယ်တော့မှ တိုက်ရိုက်မပြောပါနှင့်။ (၅) မိမိ အမှားကို လျှင်လျှင် မြန်မြန် လေးလေးနက်နက် ၀န်ခံပါ။ (၆) ချိုချို သာသာနှင့် စကား စ ပြောပါ။ (၇) တစ်ဖတ်သားက အလျှင်အမြန် “အင်း” လိုက်အောင် ကြိုးစားပါ။ (၈) တစ်ဖတ်သားကို …
မပေါ့ဆသင့်တဲ့ သံဓာတ် အားနည်းခြင်း လက္ခဏာ နှင့် သံဓာတ် အားနည်းခြင်း ရောဂါကာကွယ်ခြင်း
မပေါ့ဆသင့်တဲ့ သံဓာတ် အားနည်းခြင်း လက္ခဏာ နှင့် သံဓာတ် အားနည်းခြင်း ရောဂါကာကွယ်ခြင်း ၁။ တခြား သူတွေထက် ပိုပြီး မောပန်း လွယ်တယ် ။ ၂။ မျက်နှာက သွေးရောင်မရှိဘဲ ဖြူဖပ်ဖြူရော် ဖြစ်နေမယ် ။ ၃။ အသက်ရှူ မဝသလို ခံစားနေရမယ် ။ ၄။ ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက် ဖြစ်မယ် ။ ၅။ ရင်တုန် ပန်းတုန် ဖြစ်မယ် ။ ၆။ အရေပြားနဲ့ ဆံပင်တွေ ခြောက်ပြီး ပျက်စီးမယ် ။ ၇။ လျှာနဲ့ နှုတ်ခမ်း အတွင်းမှာ နီရဲပြီး ရောင်နေတာ ၊ …
This Year : 147124
Total Users : 442257
Total views : 1700645